Nayakhabar.com: के नेपालमा फेरि ठूलो भूकम्प आउँदैछ ? यसो भन्छन् ज्योतिष !
के नेपालमा फेरि ठूलो भूकम्प आउँदैछ ? यसो भन्छन् ज्योतिष !
नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा समेत अझै त्रास कायमै छ ।
शुक्रबार राति मात्रै सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर गएको ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पले सर्वसाधारणलाई थप त्रसित बनाएको छ । हिजो रातिको भूकम्पपछि मानिसहरुमा फेरि पनि भूकम्प आउने होकी भन्ने प्रश्न र शंका उब्जिएको छ ।
यस प्रश्नको जवाफमा ज्योतिषहरुले भने फरक धारणा पेस गरेका छन् । चर्चित युवा ज्योतिष सुनील सिटौलाले तत्कालै भूकम्पको योग नदिएको बताए । उनले भने- तत्कालै भूकम्पको योग छैन्, ठ्याक्कै एक महिनापछि सूर्य ग्रहण छ । यस्तोमा पनि ठूला–ठूला भूकम्प आउने ज्योतिष शास्त्रमा देखिएको छ । सबै भन्दा बढी त पूर्वी एसिया क्षेत्र नै जोखिममा देखिन्छ ।
उनका अनुसार अब आउने भूकम्प पाँच रेक्टर भन्दा माथिका हुनेछन् । ज्योतिषले भनेअनुसार पूर्वी एसिया भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । जबकी नेपालको भूभाग दक्षिण एसियामा पर्छ ।dainiknepal